Libreoffice ayaa loo heli karaa Android (oo ah nooca pre-alpha) | Laga soo bilaabo Linux
Codsiga, taas oo sababta oo ah waa nooc ka hor-Alpha ah Dabcan, waa wajiga horumarka, waa la soo dejisan karaa si aad ugu sameyso tijaabooyinkaaga ugu horreeya.
Waa nooc goor hore ah, oo wali in badan ka fog sidii uu u noqon lahaa nooc deggan oo aan cayayaan lahayn, laakiin dabcan waa tallaabada ugu horreysa ee weyn ee loo qaado xaqiiqo u muuqatay mid fog oo aan macquul ahayn.
Waqti hore waxaan faallo ka bixinay sida mid ka mid ah waxyaabaha kale ee ugu caansan kombiyuutarada sida LibreOffice uu u diyaarinayay soo degitaankiisa Android. Maanta waxaan ku ogaan karnaa hubaal ku filan in mashruucu si wanaagsan u horumarsan yahay, maaddaama tijaabadii ugu horreysay ee geeddi-socodkan oo dhan horayba u soo ifbaxday, taasoo socotay ku dhowaad sannad iyo badh horumar. Waxaan horeyba uheli karnaa dhadhamin waxa LibreOffice ay noqon doonto nooca hore ee-Alpha.
In kasta oo horumarku sifiican usocdo, hadana waa laqabsashada gacanta taabashada isticmaalaha dukumiintiyada sababa dhibaatooyinka ugu badan. Sidaa darteed, layaab ma leh in hirgelinta tilmaamaha noocan oo kale ah sida zoom-labo farood uusan si sax ah u shaqeyn, ama si fudud u shaqeynaynin.
Taasi waa sababta noocani loogu talinayaa oo kaliya dadka khibrada leh ee doonaya inay tijaabiyaan arjiga.
Soo Degso LibreOffice for Android (pre-Alpha)
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Isticmaal FileLet » Libreoffice ayaa loo heli karaa Android (nooca al-pre-alpha)
Raul Humberto Avila Solis dijo
Waxaan horeyba u sugayay noocaan, hadda waxaan ugu shaqeyn karaa si raaxo leh anigoon luminin qaababka udhaxeeya kumbuyuutarkeyga iyo laptopkeyga.
Jawaab Raúl Humberto Avila Solís
... ubunutu waan jeclahay XD
Jawaab Ricardo A. Fragoso
Xaqiiqdii waxaan u maleynayaa inay isku mid tahay, ka sokow XAFIISKA 'KINGSOFT' wuxuu umuuqdaa mid kufiican Ubuntu (Kamaqan karo muuqaal ahaan) sidoo kale waxaan ku isticmaalaa Android.
marka ma libreoffice ayaa ku qoran java?
Hagaag, haddii loo sameeyay android, waxaa loo sameeyay dalvik, sidaa darteed, java.
Jawaab Eduardo Campos
Beddel OS dijo
Waxaan u maleynayaa in asal ahaan lagu diyaariyey Java, laakiin maahan noocaan, laakiin sidoo kale nooca desktop-ka
Kajawaab Switch OS
Waqti ka waqti…
Waxay qaateen eh ... layaabkeygii aan ku arkay playstore-ka qolkeyga cusub in uusan jirin LO Android ah ...
Chromium iyo Firefox Nightly: Wax cusbooneysiin ah kama sameyn Launchpad ama Debian Backports